Dhageyso:-Maxkamadda Ciidamada oo xukuntay Nin is qarxin lahaa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Maxkamada Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxaa ay xukun ku riday laba Xubnood oo katirsan Ururka Al-Shabaab,kuwaas oo mid kamid ah lagu eedeeyey in uu isku qarxin rabay madaxda Hoggaanka Ahlusunna.
Ninkaan oo lagu Magacaabo Maxamuud Cabdi Cabdiraxmaan ayaa ku eedeysan in 23/5/2019,isaga oo xiran jaakada qaraxyada,isla markaana doonayey in uu isku qarixyo munaasabad ka socotay degmada Guriceel oo ay ku sugnaayeen Hoggaanka Ahlusunna ee ku biiray Galmudug la qabtay.
Cali dhubad Nuure Siyaad oo ah Eedeysanaha labaad ee ayaa waxaa Xeer ilaalinta Maxkamadda ku eedeysan inuu Al-Shabaab u qaabilsanaa sahminta uu Xaflada keenay eedeysanaya koobaad si uu isku qarxiyo.
Baarlamaanka Soomaaliland oo muddo kordhin loo sameeyey